Upstanders a reader’s theater piece about genocide
Sololoo 1- mataduree Sololoo 2- gurachaa Seenessa
Sololoo 8 - Lemkin Raphael Lemkin
Sololoo 10 – Sololoo 11 - Senator William Proxmire
Sololoo 15 – Sololoo 16 - Taner Akçam
Sololoo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Sololoo 26 – Sololoo 27 - Sololoo 28- Oskar Schindler
Sololoo 40, 41, 42, 43, 44
Sololoo 47 – Sololoo 48 - Samantha Power
Sololoo 53– Sololoo 54 - Carl Wilkens
Sololoo 57- Sololoo 58
Sololoo 66 – Sololoo 67 - Captain Brian Steidle
Sololoo 76, 77, 78,79 – Mark Hanis
Sololoo 80, 81, 82- Sololoo 83
Sololoo 87- tartiiba tainsa/gochaa Duraan dursa, bulchinsa magaalaa, mana barumssa, bakkeewwan workishoppii fi dhaabbilee baadiyya quunnami.
Sadaffan, fi kann bae barbachissa tae qunnamti kessan fillatamma iffa kessan Washington qunamaa.
A reader’s theater piece about genocide
Translated by Samira Ahmmad
Sololoo 1- mataduree
Sololoo 2- gurachaa
Geno jechunii Namolee.
Cide jechunii ajechaa.
Ajechaa karaa malee jechuni balesuu jechadhaa. Kara undumaa biyuuma, kara sanyii, karaa bifaa karaa ,amantii . Kana jechuni karamalee nama nagaa ajesuu kanaratii enyuu isaa jechadhaa.
Barra 20th kesatii namota bayetuu karaa malee ajefamee.
Sololoo 3 –
Biyaa turkii kessatii baraa 1915 ti namotaa million ti lakkamani namotaa Armenianaa karaa malee ajefmanii.
Biyaa auropaa tii baraa 1940 ti million jataamaa oltuu namotaa waraa jushii fi milliona ,shantuu karaa malee ajefamee.
Biyaa Cambodiaa tii baraa 1994 ti namotaa millionaa lamma oltuu karaa malee ajefamee.
Biyaa Bosnia baraa 1994 namotaa 200,000 karaa malee ajefamee.
Biyaa Rwandatii baraa 1994 namotaa millionatii siqantuu karaa malee ajefamee.
Biyaa Darfur, karaa malee namaa ajesuni kani jalqabamee baraa 2003 jalqabee ama amatii namotaa 400,000 tuu ajefamee.
Sololoo 4,5 –
Yeroo namotaa dhumani kana ilalani bayee nama dhibaa . Biyii lafaa malii ilalishee yeroo namoti kunii namotaa jalatanii dhabanii abbaa, adhaa , obbolessa, obboletii fi firotaa sanii dhabanii.
Sololoo 6 –
Midhamajechuun maal akka ta'e hin beekamu Ajjechaan kan dhume nama millioona kudhashan. Heelaan yokaan mamaa hiidhaatti kan dhipatan, bolla aaraa keessatti, yokin mashateedhaan kan duaan jechuudha.
Perpetraatoniin maal akka tii hinbeekna. Gantuun Awuroopaa keessa nama akka Hitler, y ookiin pol pot nama kaamboodia y okiin Miloosovichi Bosnia, yookin Abshiir Daarful keessatti isa namoota hedduu haaxaaye fixuuf yaale.
Namotaa akka Rwandaan Paul Rusesabgina yokin Swedish hero Raoul Wallenberg. Namota Hangrii jews kumaa. Kudhaa shanii olichanni(15000).
Kanni namaa midhaa mitti dhaabattonoo kunnii. Maltuu akka ta’u nibekku yokkin maaltuu akka ta’a jiru nitoatuu.Kanni nammatii dhabatani kunni yeroo namootaa millionatti lakkamanni du’anni niarguu.
Ajjeechaa Birrannio namoota namtti dhaabataniratti. Ka’u, namichaa issa namtti dhabattee dubbatuu Cepa’uu.
Odduu namotta kudhanii kannni nammattii dhabaabattanii dubarti fi dhirraa, Dargagotaafi namootaa gurriguddaa, bittaafi Ammantii qorannoo Biyota akka Africa, Asia, Auropaa fi Amerikaa, enmootni kunni kanni ajjechaa garmalle mormanidha.
Tokkoni tokko nammottaa nammaffi dhabbatanii agarsissa garagarra qabuu. Yoo Ibssoffii meshaanni garagaraa jirratee Iddonnii agarssiissaa nammichaa dubbaccaa jiruunii dukkana’uu qabba. Fakkinii mulissiichaa waan guddaratti dudaa dubbanni dubbatamma.
Sololoo 8 - Lemkin
Maqaan koo Raphael Lemkin namota afuriitu. Mattikoo kessa duu'ee, holocaust kessatti. Amnuu in dandenyee yeoo nammottii ammi kunii dhummanii.
Waanttii tokko intree wantaa' ee kannatti. Addabnissii Ituree.
Sololoo 9 –
Winston Churchill akka jedhetti wanjjalaa maqaa amlee. Maqollin barrabaadde maqq enyuummaratti unda'ee. Maqaa karraa malee namaa ajjeechaa qabbadhee dhufee. Maqaa karra malee namma ajjechuu kannin jedhuu barresee iniss karra motottaa adunya dhaanii mirrkketamee, bara 1948ttii. Serra inqabnaa turee kannii aijechaa dhowuu garuu nammotta millionatti nammota nagaa tuu itti tuute aijeeffamma turee biyaa laffarrattii.
Sololoo 10 –
Sololoo 11 -
Senator William Proxmire -
Maqaan koo William Proxmore jeshamaa. Barra lolaa lammataa. Boddaa garra Wisconsin tii goddanee siyasssa kessaa sennee. Barraa 1952, 1954, fi 1956 tii Bulchissafi Dargomme kuffe. Garraa dhumarratti barra 1958, 1964,1970 modhee.
Sololoo 12, 13 -
Wantani Amaanurraa dhabadhaa. Lolaa warraa Vietnam nanni mormaa loltotaa fi qarshii basssanni nammotaa ajjechaa garmalee ajjeffamanii.
Sololoo 14 -
Sahibni kiyaa nakadhatte akkan dhumiinsa ummataa dabarsuu gara biya United States tii. Akkan yaadetii laafaa taatii. Garuu guyaa hunda mana murtii duratti hasawa kenaa turee ammata 19 fiifhasawaa 3211 osso dabrtuun dhumaa hin darbiin.
Wanni gudaan gara garumaa anaaafi hojatoota mana murtii jidu jirru anni ta'uu hin fenee.
Sololoo 15 –
Sololoo 16 -
Taner Akçam -
Maqaan koo Taner akaam jedhamma kannani dhaladhee biyya Turkey jedhamtuu tii. Yeroonni baratuu turre wa'ee motummaa biyaa Turkey qoradhaa turee. Wa'ee mirggaffi Dubbadhaa ture. Wa'ee mirggaffi Dubbadhaa ture. Kanaffi jechaa wa' ee Turkey bareesukoti fi waggaa kudhan namidhanni.
Manna Idhaa cabsee ba'uu dhanni garraa biyyaa Germanny demme Immannaa dhi'eefadhee. Garaa kollejii demudhanii wa'ee ajjeddchaa karramalee kanniijedhuu baraa 1915 baressee.
Sololoo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 –
Bulchaan haala badaa fi ganoo ajeese ummata lakofsii isaani milliyona tokko fi cinarra caalu ummata Armenians siraa.
Bulchaan Turkey ibsa labsee dhuminsa ummata lammata hin ta'uu ja' ee.
Yeroo gargaartony Hitler gafatan akkamitii inni yaadaa ajechaa umataa jewish kanarra, Hitlar debiseef “enyuu yaadata ummata Armenians?"
Sololoo 24 –
Anii kittaaba bareese ammale hasawa kene ummata adunyaattif. Bulchaan Turkish naa jadhee lafa ballesituu ammale jiruun tiya soda kessa jirtii.
Sololoo 25 –
Y roo xiqoo duraa kaayon karorii sahiba kiyaa Hrant Dink fadhee ture dubachuu wa' ee Armenian dhuminsa ummataa.
Anii bulchaan Turkish boqonaa dukan kana akka ibsuu barbaadee maalifyadanoo dha. Niin barbaade akka ummani Turkish barbaadan digaa dhuminsa ummata isaani gafa lola Armenian.
Sololoo 26 –
Sololoo 27 -
Maqaa kiya Oskar Schindler. Anii Nazii turee.
Anii hojotaa daldalla turee, akka dubartii rebduu, dhugaa alcohol, fi qumaara tapataa.
Sololoo 29 –
Yeroo Ummata Jewish Ajesu irran qarshin omishamuu, achi ani ture.
Sololoo 30, 31, 32, 33-
Worsha biyaa Krakow jedhamu, ganda Polandjedhamuti garagarsa hirriya koo Gestapo tini jalqabe. Worsha kana human garbota ummata Jewish gegesan ture.
Ummati Jewish ganda tokkoti woliti qabamani yomu ajefamufi eragamani, bay'een isan hojetota koo ta'uu baree.Ummata kana balesa malee akka du'ani itti dhisuu hin dandene. Hamuma humni koo danda'e gargarasa isani gochuti yale. Siriti nyachise akkasumasi edoo godhufi yalee.
Y omuu ummata Jewish camp ajecha sanati fudhatani anis warsha koo issanuma wojjini sise. Akka isani dalaga wani dalagnefi jedhamani hin ajefamne mala kana isanifi tolche. Worshan koo mesha lola omisha ture,kanafi ummata
Nazi sana irratti malimaltuma irrati hojadhee. Mesha Worana sana hunda akka ummata Jewish hin miineti tolchine. Kanafu meshichi ummata German gargaruu hin dandenye.
Dargagota fi ijollota jewish ganda sana kessa sababi qulqulesutin achi isan base. Qarshi it basse loltota German akka worsha ko kessa dalagani dabarsudhaan ummata Jewish 1300 kan ta'ani issanifi godhu hin dandenefi.
Sololoo 34 -
Hanga ani du'e booda, namni tokko maqota ummata lubbun hafani sana mesha koo kessati arge.
Sololoo 35 -
Bara 1967 Ani Nazini badhasa guya yadanoo ajecha ummata Israel irrati argadhee. Maqa kottin yadanoo Yad Vashemjedhamuti mukini dhabame.Awali koosi, gaara Zion jedhamu biya Jerusalemti edoo bekamtotin ummatin Nazi sanati na awalani. Yeroo ammati ummata jews 6000 lakawamnitu aragamani.
Sololoo 36 –
Mucayooni Stephen Spielbergjedhamtu, doo'! "Schindler's list" jedhamu maqa kootin hojateti. Doo'! kunis aduny irrati bekamera.
Sololoo 37 –
Sololoo 38 -
Dith Pran -
Maqani koo Dith Pran jedhama. Biya Cambodia jedhamuti bara 1942 dhaladhe.
Bara 1970 lola Vietnam irran kani ka'ee, Combodia fi biyi koo hinjijirame.
Yeroo sana, sura wan kaasa turefi wantota taamuti turee sana ummatafi dabarsani turee.
Sololoo 39 –
Bara 1972 hanga 75 biyi Koo Chaosti kufe. Bulichani Kenya Khmer Rouge fi Pol Pot kan jedhamani wada nufi galani. Wadani isasi, jiruu nagaya fi jiruu gari nufi kenufi turee, garuu hin taamne. Namtichi Khmer Rouge jedhamu, Biyaa kena dubati debisu yalee. Mana yaala, mana bank, mana barumsa fie doc waqefana hunda sana hunda ofi issati dUkka bu'u barbade.
Sololoo 40, 41, 42, 43, 44–
Yeroo kanti, barsistoni, aboni firdi, baresitoni fi Doctomi gocha kanafi murte kena turani. Bara 1972 doctorota 600 lakkawamutu biyaa kessa turani.
Dhuma ajecha ummata Cambodia irrati doctorota 42lubbun hafani. Doctorota 1/3 kani ta'anitu biyati kessati ajefamani.
Edooma ajefamaniti awalamani.
Bara 1975 lolituni Khmer Rouge jedhamu man hidha nagese.
Woga afurifi edoo qubana forced-labor jedha muti fidame rebamni turee. Nyatale naYfhin kenine. Hanga ummani Cambodia ummata kiba Vietnamese ofjala gar bomsu.
Gara biyaa Thailand deme.Namtichi Khmer Rouge jedhamu abba koo najal ajese.
Akkasumas obbolesa koo, obboletiwan koo fi maati koo hunda najala ajesani. Mana 50 oli kan ta'u mati koo kessa dhabeera.
Sydney tani jedhamtu seena koo naYf barresite, innis "The Death and life of Dith Pran," inni kunis Do'I rrati baaye innis "The killing Fields". Kana irrani kan ka'e adunya rrati nama lubbota milliona kani ballesa hin qabne cinca of godhen ta'e. Umman sunis ummata Cambodia jedhamu turani.
Sololoo 47 –
Sololoo 48 -
Maqan koo Smantha power jedhama.
Bara 1990ti oduuni tokko naqaqabe. Oduni sunis biyaa sanati ajecha guda gesuti turee. Wonta ta'amuti jiruu sana ofi kooti laludhafi biyaa Bosnia jedhamu dhaaqe.
Sololoo 49 -
Yeroo sanati baresa ta'udhani wantuma arge sana bresuti ka'e. Ijjolenis udduma taphachuti jirani du'ani. Mati issani sani gafi gafadhetani turee. Mati issani sani gafi gafadhetani turee.
Sololoo 50, 51-
Yeroo kanati ijolota durba lolitoni dirqidhani itti xaphatuani. Durba takka gafi gafachu anse, debisa ishee irrati hundaye du' ota ummatota qulqulota sana hubachu danda'e.
Sololoo 52 -
Kana irrati hundaya'u dhanisi akka rakoni akkana akkajiru hina beak garuu, enunyu karaa ittin ittisan bekuu hin dandene.
Yeroo tokko tokko urnmatini wani garii yommu dalagan hin arga. Yeroo
hunda ummatota rakko akkana namoota irra gesan dhogu nura eggama.
Sololoo 54 -
Carl Wilkens -
Maqan koo Carl Wilkens nani jedhani jete. Bara 1994ti immo biya Rwanda turee. Ummatni naga qaban suni yomuu du'ani.Yerooma sanu Embassy America ummat ofi biya sana galchati ture haa ta'u malee ani hin dide.Yeroo sana ummatni 800,000 mati tutsi keesa du'uti turani. Kani ajesu ummata Hutus kani jedhamani dhaa.
Sololoo 55 -
Malifi akka ani hin turee nagafatani, yeroo kana annis way'e ummata Tutsi ijolota durba fi ijolota dhira dagachu hin dandene.
Yerooma kanati ani ummata kanafi wani garii dalaguti ani turee. Yeroo rna kanati ummatini rakko irrani kanka'e, dhibe irran kani ka'e duti turani. Ummata kana hambisudhafi itti ana president argetan dubisu yalee. Innis itti gafatama lubbota badaniti.
“Obbo Mommicha minstera, maqaan koo Carl Wilkins dha obbo
muumicha ministeeraa innis ana illalee harka raasee akkanajedhee" “eyyeen waa'ee keettifhojii keettii dhagayeera akkamidha?"
Anisdeebisee akkana jedhe "tole Obbo amma illee gaarimiti. Oranphanis Gisimba dhaan marfameera kanaafuu duguugamuuf deema.”
Inni gargaartoota isaatti dubbatee booda a kkana naanjedhe. "waan deemaaajiruu kana eenyudha kan sirreessu akka isaan Orphans irraa baraaramaniif fuulduratti nan ilaala.”
Sololoo 58 -
Ani unuted statti baayyee gaddeera biyyyi united states biyya bilisaafi biyya gootaadha. Waan fedhaes raawachuun danda' a.
Paul Rusesabagina -
Maqaan kiyyaa Paul Rusesabegina dha. Ani yommu duguuginsa sanyii ugaandaatii geegefama lubbaa kumaan lakaaamu nam gargaaraa ture dha.
Sololoo 61 –
Maqaan kiyya Hutu dha maqaan warra koo immo Tutsi. Nuti waraqaa eenyummaadha nuti namoon kun waraqaa. Eenyumma irratii argamna. Gartuun keeenya sadarkaa hawaasaa gargaarsaa namaaf kennu qabna. Kaneef waraqaa eenyumaa kana yero hunda baadhannee deemna akkuma wama yiudoota humnaan gidifaamaa turee. Bulchiinsii kenyas mutusiin ggeefama.
Sololoo 62, 63 -
Ebla, 1994 yommu Presidaantiin Ruwandaa biyyattii deebiaa jirutti xiyara isaa qilleensaa kessaatii rukkuamete. Inni sun yommu ajeechaanjalqabamudha. Waanuma wal fakkatuun mutunis duute.
Uummman hunduu bakka adda addaatti wal ajeesuu eegale ollaan ollaa ajeesa. Abaan warraa wal ajessa. Barattaafi barsiisaaniis wal ajeesu luboonni fi tajaajiltoonis wal ajeesu eenyuu mana kadhataa haa eegu.
Sololoo 64 -
Anis of eegannoof jecha matiikoo gara hotela Collines Millettin geese. Nmoon biroon illee akkuma koo gara hotel a sanaa dhufanii jiruu. Anis booda isaan hin deebisne.
Y ommu dugagginsii sanyii sun xumurametti namooni kumaatamma taanu
mana mana malee hafne biyyis akka du'a reefaan haracaaye. Bakka hunda tirisatuu uursa namoota nu walliinjiraaatan qofatujiraate. Seena koo ni beekatu moovii otela a “Rwanda jedhuu lrraa.”
Sanyii sun namoota milliona galaafata guyyaa dhibba tokko adunya hundi ija dununfatani, gurra cufatani cinqaa tana kessati nuu lakkisan. Dirqama Ummani nuf dhagahu qaba.
Sololoo 66 –
Sololoo 67 -
Captain Brian Steidle -
Maqan kiya Brian Steidle jedhama. Ani Itti Gafatama U.S. Marines bara 1990 hang a bara 2003. Bara 2004 kessa akka nama Military laaluti African Union groupijedhamufji'aajaha Sudan kessati dalage. Kaaba fii kibbi Sudan loola wagga 20 walloolu turan dhaban, Anis loola san dhabuu kessati hirmadhe ture akka gegesatii.
Sololoo 68 -
Cinqaa takka rakkini magaala adda adda kessati demuu gaabasa raa nu gahe, naano Darfur jedhamu, nutis naano Darfur kana demne wan rawataa jiru laalu dhaf. Lenjin warra kamiyyu nama qophesuu wan achi rawatama jiru sanif.
Mottumaan biyya Sudan ummata isa akka hamati fixaa jira. Arab Militaris Janjaweed wari jedhamu gosa Africani Darfur kessati. Nama dhibbafi kumaa meqa dhira, dubartii, ijoolle akkasiti ajefaman.
Sololoo 69 -
Milliona lamaafi haIfa namni caalu iddo jirenya isaani fii mana isanira demsifamani godanan.
Sololoo 70 -
Motumman Kenya rakkina Darfur kana Genocide jedhe mogasee jira, Genocide tokkoffa kan 215t century. Kuni yero tokkoffa seena kessati genocide mogafamu isa oso rawatamuti jiru.
Suuran tokkofa kan ani Darfur kessati kasse mucayoo xiqqo takka Mihad Hamdi, isin ganna tokko turte yero san. Helicopteri bakka maatin isi jiraatu bombin dhahee, Janjaweed fardan dhufani warra hafe cinqani akkasuma rakkina adda adda gama wal qunamtii salaatinis irra gesan jiran. Harmen isi uffata kessati mamarte mudhiti qabate baqachuni heddu yaali gote.Garu xiyyitin sanuma kessan bate somba Mihad dhufte. Yero ani Mihad arge harka hadha isiti, diqqoma hafura baafati. Ijaa gaari fii du'aa'in male wan takkan isii gargaaru
dadhabun kiyya Heddu nati dhagahame, yero akkasiti wan taha jiru cameran qabu. Guyya lammaffa egga gargaarsii dhufe, looli haga duraani caala hammate, Mihaad achuman dhabani.
Sololoo 72, 73-
Ballesatu nati dhagayama wan hamena Darfur san dhabuuf homa godhu hin dandayinif. Heddu yaali godhe ummataa America argisiisuuf akka ummani Darfur akka male gargarsaa Kenya fedhan.
Sololoo 74, 75-
Wal Gahi god he, odoo ira gabaase, Kitaaba katabe
Moveni dalagame wanti hamani f dhufaea farida dubani» Ani wanta hogantoota fltamantin kani dubadhef, namani kaa miuu akka dhagahu qabu fi . Ani yerro woraa midhani iarra gayeef ragesu, ummani Washington akka naa dhagefatau ni amanaa.ani ni amana akka galena lafaa irra burqu torbani torbanitti.Want kun akka dhabatu ni amana .want sun wogga afurin dura.
Sololoo 76, 77, 78,79 –
Mark Hanis -
Maqan kiyya Mark Honis jedhama.Ani kan itti gudadha Ecuador. Akkakayyon kiyya arfanu ummata midhaani irra gayye irra nama hanbisanirru.
Woldaa Kenya keessatti, angaftoni jewshi tokkumayyuu hoccuu harka dheera ufftni hin beekan. Lirree isnaai irrti barbadu nazii dhan taatuu godhatan ( kaafatan ) yoo mii yuu mudhachufi jachaa. Wornan addunya 2ffaa booda dur taa, aan addunya akkas jadhini “lamuu hin ta'uu” lamuu lamuu hin ta’uu otoo kan biroo ta'uu ummatni million naga haa hin du'u taatuun nu yaadachise guyya hunda lamuu hin ta'uu jechuun sirumaa hin ta'u . Guyyaa tokko dubbisa waa'ee ajecha Darfur keessatti odeemama jiru dubbise. Sammuu kiyya keesstti ba'eey yaadee midha kana xumuruufi. Ani fi hiriyyoonni tiyya dhaaba hirmaannaa midhaa judhu bu'uuressine. Eragni Kenya barsisu gumachu bekisisu. Nuuti ummata wanii midha barate worrata
Kayyon Kenya mallqa wolitti kuu sufi ummata gama Africa Darfur kessatti naga argamissin garagarudha. Malaqnin nuuti wal tii qabunu kun olufii wontat armanii gadittfi isanis, dukanii, botti fi wontanta hirmatoota biyya Africa hundafii barbachisuu.
Baratonii college sadarika lamafa keessaa jiraan wonta add a ta'ee dalaguu fedhan. Midhan kun kan ummamef sababa ummani bekumisa dhabun namni kamiyu halata kan irraa ufii eguu fi dhabu qabu waan hin dandenyef.
Sololoo 80, 81, 82-
Sololoo 83 –
Anti-genocide nii qabnaa bilbilla Washington niqabnna fi sirritti fillatamma kant ta'an bilbila dussa. Dorgomifi leenjii.hikeninna nanno biyyati. Hundinnu genocide dura dhaabbachun nii danda'aa.
Sololoo 86- Kaumssa kurnnan; tokko tokko issani argachuf 'enter' tuqqi
Kunn senna nammota kudhanitti wantaa adda warra hummaniti- tokko baqaatoota milliona kessa; tokko itti gaffatama mana marre dhibba kessa, nama surra kassu, manager hottela, dalddalla, lallabba, gazexessa, capittani donni, professor, baratta collegii.
Ka'anirru dhabataniru. Hundinu dadetissanitin wanta guchuu danda'an godhaniru. Raphael Lemkin walgahi Genocide darbbe fi William Proxmire ooffalchamme. Dith Pran's surra Cambodiatti wanta ummame adunyati agarsise. Paul Rusesbagina, Oskar Schindler, fi Carl Wilkens lubbu faysaniru. Samantha Power jechaa sodachissa genocide kaan. Brian Steidle surra kase yalli laffaa siyyasa jijirufi yalle. Taner Akcam dubu dhugaa dub ate wa'e Armenian genocide. Mark Hanis hummatati dubate genocidii akka dhabatu.
Akkamitti "upstanders" ta'uu dandeessa?
Waantota sadii hojjechuu dandeessa.
Sololoo 87- tartiiba ta'insa/gochaa
Duraan dursa, bulchinsa magaalaa, mana barumssa, bakkeewwan workishoppii fi dhaabbilee baadiyya quunnami. Akka issan waa'ee gchaalee sanyii balleessuuu dammaqsi, jijjabeessi.
Lammaffaa, nammoota daarfuriifi addunyaa keessatti balaa addaa keessajiraniif gumaachi maallaqaa akka godhamu taasisi. Dhaabbileewwan baay'een hojii dansaa hojjechaa jiru-. - COmmitte en Baqqatta Americaa, Genocide Intervention Network, Saganta Nyaata Adunyaa, Committee Birmachuu International fi k.k.fti akka murti itti kennan kennamef.
Sadaffan, fi kann ba'e barbachissa ta'e qunnamti kessan fillatamma iffa kessan Washington qunamaa. Genocides kan ta'u fi kan ta'ajirru wantta nammota siyyass kan dhabu wanta hin qabefidha. Yokkan kan bakka buu'a mana marre fi senatarota odefano nurra barbaadu. Namoni bayyen walqunnamti bakka bu'a issani wallin hingodhan sabbabnisaa wanta bakka bu'a issani hin beknnef, yokkan akka issan qaqabatan dhabaniti yokkan maal akka jedhani wallalaniti.
I-888-GENOCIDE. Zip code nonno kessani galcha fi achitti bakka bu'a kessan
qunnamu ni dandessu, senator, yokan White House wallin. Wall qunamu kessan durra
whant jettani dhagahuu. Bilbilla bilbilamu hundi tokkon tokko issa gatti qabba. Qillenssajijjiramma hummu
Jechaa Anne Frank" how wonderful it is that nobody need wait a single moment
Mee hundi kenyaa wall qabanne haa kannuu jaraa kanna kessa sanyi balleessuu (genocide) dhabuffii.